बिहानको समय। एउटा आँखा चिम्लिँदै अर्को आँखाले मोबाइल हेरेँ। पाँच बजिसकेको रहेछ। बिहानै विद्यार्थीको घर जानुपर्छ भनेर म हिजो चाँडै सुतेको थिएँ। जानैपर्ने कारण पनि थियो। कक्षा १० मा पढ्ने मंगली तामाङ स्कुल नआएको नि हिजो झन्डै एक हप्ता भइसकेको थियो। मंगली स्कुल किन नआएको भनेर म उसको भाइ सुजितलाई सोधिराख्थेँ। हिजो उसको भाइले मलाई भनेको थियो, “सर मंगली त अबदेखि स्कूल नआउने रे, सबैले सम्झाउँदा नि स्कुल जान्न भन्छे, अब तपाईं आफैं गएर बोलाउनु। ऊ त स्कुल कहिले नि नआउने भन्छे।" मंगलीले किन स्कुल नआउने भनेकी होली, उसको घर गएर उसलाई कसरी स्कुल आउन फकाउने होला भनेर सोच्दै मेरो रात बितेको थियो। राम्ररी निन्द्रा पनि परेन। कतिखेर आँखा लागेछ थाहै भएन। त्यसैले बिहान अझै पनि राम्ररी बिउँझेको थिइनँ। तैपनि उठेँ र झ्याल खोलेँ। बाहिर हेर्नासाथ म झसङ्ग भए। सिमसिम पानी पो परिराखेको रहेछ। सेतो तुवालोले पूरै ढाकेको थियो। चार पाँच फिट वरपर बाहेक टाढाको केही देखिँदैन थियो। यस्तोमा कसरी जाने भन्दै बाहिर हेर्दै एकछिन टोलाए। तैपनि जानु त पर्छ भनेर आँट गरेँ र ढोका खोलेँ। एकछिनमा फ्रेश भएर बाहिर निस्किएँ। अगाडि नै अमिरको घर थियो, कक्षा १० मै पढ्ने अर्को विद्यार्थी। हिजो 'सर, म पनि तपाईंसँग जान्छु है' भनेको हुनाले मैले “अमिर, अमिर” भनि बोलाएँ।
म पनि उसैको पाइला पछ्याउँदै अघि बढेँ। हामी नवलपुरबाट हिँड्दा पौने ६ भइसकेको थियो। बाटोमा अमिरसँग मंगली र सुजितको बारेमै कुराकानी भयो। “मंगली स्कुल किन नआएकी रे सर, केही थापाउनु भयो त?” उसले सोध्यो। मैले 'खै थाहा पाएको छैन, अब उता पुगेपछि नै थाहा हुन्छ' भनेर जवाफ दिएँ। यस्तै यस्तै कुरा गर्दागर्दै हामी भेडीचौर पुग्यौं। अघिसम्म बाटो ओरालो थियो, सजिलै आइयो, अब उकालो चढ्ने बेला भयो। अमिर छिटोछिटो हिँड्थ्यो, म बिस्तारै बिस्तारै उसैको पछि हिँड्थेँ। उकालो सकिनेबित्तिकै उसले हातका औँलाले देखाउँदै भन्यो, “ऊ सर कविराज, कविता र जयराम ५ कक्षासम्म पढेको बोर्डिंङ स्कुल।”
मैले उसले देखाएतिर हेरँ। स्कुल भुइँचालोले पूरै भत्किएको रहेछ। "अहिले पनि पढाइ हुन्छ त यहाँ, भुइँचालो ..." मैले सोधेँ। “हुन्छ सर तर विद्यार्थी एकदम थोरै छन्,” मेरो कुरा सकिन नपाउँदै उसले भनिहाल्यो। कुराकानी गर्दागर्दै हामी मुले गाउँ पनि पुग्यौं। मुले वार्ड न. ९ नवलपुर गाविसकै एउटा अंश हो। यस गाउँका धेरैजसो विद्यार्थी नवलपुर माविमै पढ्न आउँछन्। बाटोमा भेटेका मान्छेसँग अमिर तामाङ भाषामा कुरा गर्दथ्यो, म बुझ्दिनं थिए, त्यसैले खासै मतलब पनि लाग्दैन थियो।
घरको आँगन सुनसान थियो। “सुजित, मंगली”, मैले बोलाएँ तर कुनै जवाफ आएन।
अनि आमाले आज सबै जना तल खेतमा गएका छन् भन्नुभयो। अमिर र म एकअर्कालाई हेर्न थाल्यौं। “अब के गर्ने त सर”,अमिरले मलाई सोध्यो। अनि मैले मोबाइल निकालेँ र मंगलीकी आमालाई कल गरेँ।
“म खेतमा छु, सुजित र मंगली माथि बारीमा छन्, म त्यतै जाँदै छु, पुगेर दुवै जनालाई पठाइदिन्छु," उहाँले भन्नुभयो। मैले हुन्छ भनेँ अनि फोन राखेँ।
“हामीले बारी देखेका छैनौं”, मैले भनेँ। उहाँले 'घर अगाडिको त्यो सानो बाटोबाट सिधै तल आऊनुहोस् सर, भेटाउनु हुन्छ, बीचमा एउटा चौतारा पनि आउँछ' भन्नुभयो र फोन काट्नुभयो।
घर अगाडि देब्रे पट्टिबाट एउटा सानो बाटो रहेछ, अलि अलि ढुंगा पनि छापेको रहेछ। हामी बारीमा जानुपर्ने भयो, जाउँ तल भनेर मैले अमिरलाई भनेँ अनि म अगाडि बढेँ। अमिर बारी, बारीमा पो जाने सर भन्दै मेरो पछिपछि लग्यो। धेरै पानीले भिझेको बाटो, लेउ लागेर चिप्लो चिप्लो भएको रहेछ। हामीले त्यो चिप्लो बाटोको छेउ छेउमा जे भेट्यौं त्यो समाउदै बिस्तारै बिस्तारै ओर्लियौं। बीचमा मकैबारी आयो। दुवै जनालाई अब कता जाने भयो। सर यी यहाँ मान्छे हिँडेको जस्तो छ हामी यसैलाई पछाउँदै जाऔं भन्दै अमिर अगाडि बढ्यो। मकै बारीमा त्यो गिलो गिलो माटो हाम्रो पाइलाले दबिएको जस्तो अनुभव हुन्थ्यो। एकैछिनमा बाटो हरायो। हामी मकै बारीभित्रै हराएझैं भयौं। सर अब बाटो खोज्नुपर्छ हामी तल तल तिर जाऔं भन्दै ऊ अगाडि लम्क्यो। म हुन्छ भन्दै उ सँगै हिँड्न थालेँ। दुइ तीन कान्ला जति हाम्फाल्दै हामी ओर्लियौं र बाटो पनि भेटायौं। बाटो छेउको बारीमा काम गरिराखेको मान्छेलाई सोध्दै सोध्दै हामी अघि बढ्यौं। अलिकति अगाडि गएपछि मंगलीको ममीले भन्नुभएको चौतारा पनि आयो। चौतारबाट तल झर्दै गर्दा सुजित, मंगली अनि अरुहरु बोलिरहेको आवाज सुनिन थाल्यो।
अवाज त मैले पनि सुनें। यतिकैमा अमिरले भन्यो, "उ तल त्यता रहेछन सर सबै जना।” “धेरै जाना पो रहेछन्”, अमिरले थप्यो।
सबै जना मकै बारीको छेउमा रहेछन्। हामी दुई जना छिटो छिटो झर्यौ र नजिकै पुग्यौं। नजिकिँदै गर्दा मंगलीले र सुकुमाया (भर्खरै एस.एल.सी. दिएर बसेकी विद्यार्थीले) नमस्ते सर भने। मैले नि नमस्कार फर्काएँ। “सुकुमाया के छ खबर?”, मैले सोधे। उसले ठिक छ सर भनी। त्यहाँ धेरै जना हुनुहुन्थ्यो।नजिकै पुगेर मैले सबैलाई नमस्ते गरेँ अनि यताऊती हेरेँ।कक्षा ७ मा पढ्ने सावित्री पनि त्यहीँ बसेर मलाई हेर्दै हासिराखेकी थिइन्। सबै जनाको हातमा पहेँलो र छेउतिर अलि अलि कालो लागेको रोटी थियो र रोटीमाथि नै साँधेको भटमास पनि। बिहानै सबै जना कोदो रोप्न आउनु भएको रहेछ र अहिले खाजा खाने बेला भएको रहेछ।
मंगली चुपचाप टाउको निहुराएरै बसी, एक शव्द पनि बोलिनँ। उति नै खेर एकजना दुब्लो अग्लो दाई हामिबाट अलि टाढा जानु भयो र हरियो मकैको ढोड जम्मा गर्न लाग्नु भयो। सरले केही भन्नु हुन्छ भनेर बाउ चाहिँ भाग्यो ऊ भनेर त्यही भएको एक जना दिदीले भन्नुभयो अनि बल्ल मलाई थाहाँ भयो कि ऊहाँ मंगलीको बुवा हुनुंहुदो रहेछ। “आमाले त स्कुल जाऊ भान्नु भएको त होनि मान्दै मान्दिन,” उहाँले थप्नुभयो। म मंगली भएतिर फर्किएँ अनि किन स्कूल नजाने भनेकी स्कूल त जानु पर्योनि हैन र भनेर सोधे। उसले यतिखेरपनि केहि बोलिन तर सुक्कं सुक्कं गरेर रुन थाली। म एकछिन चुप भएँ। यतिकैमा त्यहाँ भएको सबैले उसलाई तामांङमा सम्झाउन थाल्नु भयो तर के के भन्दै हुनुहुन्थ्यो चाहिँ मैले केहिपनि बुझिनं। सर नै त्यति टाढाबाट बोलाउन आउनुभयो स्कूल त जानु पर्छ पढाई पनि पुरा गर्नुपर्छ, सबैजना यस्तैयस्तै भन्दै मंगलीलाई सम्झाउंदै हुनुहुन्थ्यो। मंगली चुपचाप नै थिइ। एकछिनपछि भने उसले एकासी झर्केको र रुन्चे स्वरमा तामांङमा केहि शब्दहरु भनि। मैले उसले भनेको केहिपनि बुझिनं अनि अमिर र सुजितको अनुहारमा हेर्न थाले। उनिहरुचाहिँ हासिँराखेका थिए।
म एकछिन डोकोमाथि नै टोलाएर बसिराखेँ। अमिर, सुजित र म बारीको माथ्लो पाटोमा थियौं र मंगली सुकुमाया सावित्रीहरुचाहिँ तल्लो पाटोमा कोदो रोप्दै थिएँ। मंगलीकी दिदी, भाउजू मंगलीलाई केही भन्दै थिएन। मंगली पनि अलिक रुन्चे स्वरमा बोल्दै थिई। के के कुरा भयो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन तर यति यकिन चाहिँ भयो, तल स्कुलकै विषयमा कुराकानी भइराखेको थियो। यस्तो लग्थ्यो सबैजना रोइरहेका छन्। मलाई माझी सरले भन्नु भएको कुरा याद आयो। कक्षा १० को फर्म बुझाउन एकदुई दिनमा लानुपर्छ भन्नुभएको थियो। फर्म नभरे १० कक्षाको परिक्षा दिन पाइदैन थियो। मंगलीले फर्म भरेकी थिइन। म अलिक नजिक गएर फेरि मंगलीलाई सम्झाउने प्रयासमा लागेँ। “बुवाले स्कूल नजाऊ भन्नुभएको हो र मंगली?”. मैले सोधे। मंगलीले जवाफ दिइन। आमाले के भन्नु हुन्छनि? स्कूल नजाउ भन्नु हुन्छ र। “आमाले त जाऊ भन्नु भएको छ तर बुवाले मलाई धेरै नराम्रो संग के के भन्नु भयो, गाली गर्दा नि धेरै नराम्रो शब्दको प्रयोग गर्नु भयो, आमालाई पनि पिट्नुहुन्छ त्यसैले म स्कूल आउँदिनं सर अब”, मंगलीले धेरै भाबुक हुदै भनी।
एक दुई दिन नआउनु, पछि बुवाको रिस मरेपछि अनि काम पनि सकिएपछि आउनु नि है। तर अहिले चाहिं सरले फर्म भरिराख्दिन्छु तिम्रो फोटो र जन्मदर्ताको कागज चाहिँ देउ न सरलाई है। “मलाई ढिला पनि भयो अब म जानुपर्छ”, मैले घडी हेर्दै भनें। मंगली र उसको भाउजुबीच एकछिन दोहोरो कुरा भयो। सबै नबुझे पनि अलि अलि चाहिं बुझे जस्तो अनुभव भयो। फोटो र जन्म दर्ताकै बारेमा कुरा गरेका थिए। कुरा गर्दा गर्दै मंगली रुदैं चिच्चाई। सुजित नजिक आयो र भन्यो ,”मंगलीले त फोटो सोटो च्यातेर फालिसकि भन्दै छे सर”, तर फालेकी छैन होला सर लुकाएको ठाउँ म खोज्छु अनि स्कूल लिएर आउँछु। मैले फेरि घडी हेरें ८ बजिसकेको थियो मलाई घर फर्कियर खाना खाएर ९ बजेको एक्स्ट्रा क्लास लिन स्कूल पुग्नु पर्ने थियो। अब ढिला भयो भन्ने मनमा भयो अनि मंगलीलाई भने एकचोटी फेरी राम्ररी सोच्नु है अनि सुजितलाई फोटो र जन्म दर्ताको कागज चाही पठाउनु ल म अर्को दिन माझी सर लाई लिएर आउँछु अनि तिम्रो बुवा संगपनि कुरा गर्छु। अहिले सरलाई ढिला भयो सर जान्छु ल। “हस सर राम्ररी जानु है," मंगलीले भनी। ल सावित्री, सुकुमाया बाइ भनेर म उकालो चढेँ। सुजित र अमिर पनि मसँगै माथि उक्लिए। सुजितको घर पुगेपछि सुजितले एकछिन ल सर म फोटोहरु खोज्छु भनेर भित्र गयो र एकछिनमा उसले जन्मदर्ता चाहिँ पाएको तर फोटो चाहिँ नभेटाएन गुनासो सुनायो। धन्न मंगलीले भनेको जस्तो च्यातेको छैन भनेर एकछिन ढुक्क भएं। जन्मदर्ता छ भने फोटो पनि पक्कै छ राम्ररी खोजेर स्कुल आउनु है भनेर म सुजितसंग पनि बिदा भएं। अमिर र म बाटोतिर उक्क्लियौं।
शनिबार, चैत्र १२, २०७३ १२:३५:४२